Spy Video Recorder – Gf08 – Rocket Online Shopping
Spy Video Recorder – Gf08
Home ShopSpySpy Video Recorder – Gf08
Spy Video Recorder - Gf08 quantity
Category: Spy.	Tags: CCTV, gf 07, gf 08, location, MMS Photo, MPT, problem, sim card, spy video recorder, standby, technology, telenor, thieve, tiny and small, Voice, ကိစ္စ, စပိုင်, စုံထောက်, တည်နေရာ, နည်းပညာ, ပြဿနာ, သူခိုး, အရွယ်အစားသေး, အသံ.
သင့်မှာ စုံထောက်လုပ်စရာ ကိစ္စ တစ်ခုခု ရှိနေပြီလား?
? GF08 – 32000 kyats (တန်ဖိုး -၃၂၀၀၀ကျပ်) ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းများကိုသာ ရောင်းချပါသည်။
တန်ဖိုးနည်း GF07 ထက်အများကြီးကောင်းပါတယ်
✔️ တည်နေရာ location ကို အနီးစပ်ဆုံး ပြပေးနိုင်ခြင်း
✔️ အချိန်ကြာကြာ Video ရိုက်ထားနိုင်ခြင်း ၊ အသံဖမ်းထားနိုင်ခြင်း
✔️ 3.5cm မို့ အရွယ်အစားသေးလွန်းလို့ SPY လုပ်လို့ကောင်းခြင်း
? ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာသော နည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လူမှုရေး အခတ်အခဲ တွေကို ဒီလို သေးငယ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးနဲ့ ထောက်လှမ်းလုပ်နိုင်ပါပြီ။
✔️ ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို Rocket Online Shopping မှ တစ်ခုခြင်းရှင်းပြပေးပါ့မယ် ။
? ဆိုင်မှာ အိမ်မှာ CCTV လိုထားကာ သူခိုးဖမ်းနိုင်ပါမယ်။
? ကားထဲ ထည့်ပြီး Location ကြည့်နိုင်ပါမယ်။
? ကိုယ်အပြင်သွားချိန် အတင်းပြောတာ ခိုးနားထောင်နိုင်ပါမယ်။
? ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ စာချုပ်တွေကို ချုပ်ဆိုခြင်း စသည့်နေရာမှာ Video ရိုက်ထားလျှင် နောက်ပိုင်း ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာခဲ့လျှင် သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက်
စသဖြင့် စုံထောက်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းအတွက် သေးငယ်ပြီး အသုံးဝင်မှုများလို့ မိမိတို့ အဆင်ပြေသလို သုံးနိုင်တဲ့ စက်လေးပါ
‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
✅ စက်ထဲကို MPT or Telenor Sim Card ထည့်ရပါမယ် ။ SD ကဒ်လည်း ထည့်ရပါမယ်။
? အသံတွေကို နားထောင်လိုပါက ထည့်ထားသည့် Sim Card နံပါတ်ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ စက်က အလိုအလျောက် ဖုန်းကိုင်ပြီး စက်ရဲ့အနီး (၁၀)ပေခန့်အကွာအဝေးမှ အသံများကို ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
? Video ရိုက်ခြင်း ၊ ကိုလည်း ထည့်ထားသည့် Sim Card နံပါတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ Command ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ- စက်ထဲက ကတ်နံပါတ်ကို 555 ဟု ပို့လိုက်တာနဲ့ Video စရိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Message ၀င်တာနဲ့ အလုပ်စတင်လုပ်နေပါပြီ မခဲယဉ်း မခတ်ခဲပါဘူး)
? တည်နေရာ Location ကို သိလိုလျှင်လည်း Sim Card နံပါတ်ကို 777 ဟု ပို့တာနဲ့ ခဏအကြာမှာ Link ပို့လာပါလိမ့်မယ် အဲ Link ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မြေပုံအတိုင်းလေးပြပေးမှာဖြစ်လို့ လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်နိုင်မှာပါ။
? အခြားလုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ ဘက်ထရီ ရာခိုင်နှုန်းကြည့်ရှုခြင်း ၊ ထည့်ထားသည့် SD ကဒ် ဘယ်လောက် Free ကျန်သေးလဲ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း ၊ Card ကို Format ချနိုင်ခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပြင် MMS Photo ဟုခေါ်သည့် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မက်ဆေ့ကနေပဲ ပုံပြန်ပို့ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ် သို့သော် မြန်မာပြည်တွင် ထို MMS စနစ်က အဆင်မပြေသေးသဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်သေးပါဘူး။
? Video ရိုက်သည့်အခါ 10 မိနစ် တစ်ပိုင်းစီ ဖြတ်ပေးပြီး အားအပြည့်သွင်းထားပြီး ဆက်တိုက်ရိုက်မယ်ဆို3နာရီမှ 5နာရီထိ ဆက်တိုက် ရိုက်နိုင်ပါသည်။
⏳ Standby အနေဖြင့်ကတော့ 3-5 days ခံနိုင်ပါတယ်။
? Memory အနေဖြင့်ကတော့ 1 နာရီလျှင် 600MB ၀န်းကျင် အသုံးပြုပါတယ်။
? ရိုက်ကူးပြီးထားသော Video များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုပါက မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ဖြစ်စေ Computer တွင်ဖြစ်စေ SD ကဒ်ထုတ်၍ အလွယ်တကူ ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
? ဆိုင်ဖွင့်ချိန် ► မနက် 9:00 မှ ည 5:00 ထိ။
? အော်ဒါမှာယူလိုပါက ဆိုင်ဖွင့်ချိန်အတွင်း ဖုန်းဆက်မှာယူပေးပါ။
Gf08 – 32000 kyats
Gf07 – 25000 kyats
သငျ့မှာ စုံထောကျလုပျစရာ ကိစ်စ တဈခုခု ရှိနပွေီလား?
? GF08 – 32000 kyats (တနျဖိုး -၃၂၀၀၀ကပျြ) ပစ်စညျးအရညျအသှေးကောငျးမြားကိုသာ ရောငျးခပြါသညျ။
တနျဖိုးနညျး GF07 ထကျအမြားကွီးကောငျးပါတယျ
✔️ တညျနရော location ကို အနီးစပျဆုံး ပွပေးနိုငျခွငျး
✔️ အခြိနျကွာကွာ Video ရိုကျထားနိုငျခွငျး ၊ အသံဖမျးထားနိုငျခွငျး
✔️ 3.5cm မို့ အရှယျအစားသေးလှနျးလို့ SPY လုပျလို့ကောငျးခွငျး
? ခတျေမှီဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျလာသော နညျးပညာတှကေို အသုံးခပြွီး မိတျဆှတေို့ရဲ့ လူမှုရေး အခတျအခဲ တှကေို ဒီလို သေးငယျတဲ့ ပစ်စညျးလေးနဲ့ ထောကျလှမျးလုပျနိုငျပါပွီ။
✔️ ဒီပစ်စညျးလေးရဲ့ အသုံးဝငျပုံတှကေို Rocket Online Shopping မှ တဈခုခွငျးရှငျးပွပေးပါ့မယျ ။
? ဆိုငျမှာ အိမျမှာ CCTV လိုထားကာ သူခိုးဖမျးနိုငျပါမယျ။
? ကားထဲ ထညျ့ပွီး Location ကွညျ့နိုငျပါမယျ။
? ကိုယျအပွငျသှားခြိနျ အတငျးပွောတာ ခိုးနားထောငျနိုငျပါမယျ။
? ကိုယျ့လုပျငနျးနဲ့ ပကျသတျတဲ့ စာခြုပျတှကေို ခြုပျဆိုခွငျး စသညျ့နရောမှာ Video ရိုကျထားလြှငျ နောကျပိုငျး ပွဿနာ တဈစုံတဈရာဖွဈလာခဲ့လြှငျ သကျသပွေနိုငျဖို့အတှကျ
စသဖွငျ့ စုံထောကျလုပျဖို့ လိုအပျတဲ့ အလုပျတိုငျးအတှကျ သေးငယျပွီး အသုံးဝငျမှုမြားလို့ မိမိတို့ အဆငျပွသေလို သုံးနိုငျတဲ့ စကျလေးပါ
✅ စကျထဲကို MPT or Telenor Sim Card ထညျ့ရပါမယျ ။ SD ကဒျလညျး ထညျ့ရပါမယျ။
? အသံတှကေို နားထောငျလိုပါက ထညျ့ထားသညျ့ Sim Card နံပါတျကို ဖုနျးချေါလိုကျတာနဲ့ စကျက အလိုအလြောကျ ဖုနျးကိုငျပွီး စကျရဲ့အနီး (၁၀)ပခေနျ့အကှာအဝေးမှ အသံမြားကို ကွားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ
? Video ရိုကျခွငျး ၊ ကိုလညျး ထညျ့ထားသညျ့ Sim Card နံပါတျကို သကျဆိုငျရာ Command ပေးခွငျးဖွငျ့ လုပျဆောငျခိုငျးနိုငျပါတယျ (ဥပမာ- စကျထဲက ကတျနံပါတျကို 555 ဟု ပို့လိုကျတာနဲ့ Video စရိုကျနပွေီဖွဈကွောငျး Message ဝငျတာနဲ့ အလုပျစတငျလုပျနပေါပွီ မခဲယဉျး မခတျခဲပါဘူး)
? တညျနရော Location ကို သိလိုလြှငျလညျး Sim Card နံပါတျကို 777 ဟု ပို့တာနဲ့ ခဏအကွာမှာ Link ပို့လာပါလိမျ့မယျ အဲ Link ကို နှိပျလိုကျတာနဲ့ မွပေုံအတိုငျးလေးပွပေးမှာဖွဈလို့ လှယျလှယျကူကူကွညျ့နိုငျမှာပါ။
? အခွားလုပျဆောငျမှုတှကေတော့ ဘကျထရီ ရာခိုငျနှုနျးကွညျ့ရှုခွငျး ၊ ထညျ့ထားသညျ့ SD ကဒျ ဘယျလောကျ Free ကနျြသေးလဲ ကွညျ့ရှုနိုငျခွငျး ၊ Card ကို Format ခနြိုငျခွငျး စသညျ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ အပွငျ MMS Photo ဟုချေါသညျ့ ဓါတျပုံရိုကျပွီး မကျဆကေ့နပေဲ ပုံပွနျပို့ပေးခွငျးတို့ကို လုပျဆောငျနိုငျပါသေးတယျ သို့သျော မွနျမာပွညျတှငျ ထို MMS စနဈက အဆငျမပွသေေးသဖွငျ့ လုပျဆောငျနိုငျမညျ မဟုတျသေးပါဘူး။
? Video ရိုကျသညျ့အခါ 10 မိနဈ တဈပိုငျးစီ ဖွတျပေးပွီး အားအပွညျ့သှငျးထားပွီး ဆကျတိုကျရိုကျမယျဆို3နာရီမှ 5နာရီထိ ဆကျတိုကျ ရိုကျနိုငျပါသညျ။
⏳ Standby အနဖွေငျ့ကတော့ 3-5 days ခံနိုငျပါတယျ။
? Memory အနဖွေငျ့ကတော့ 1 နာရီလြှငျ 600MB ဝနျးကငျြ အသုံးပွုပါတယျ။
? ရိုကျကူးပွီးထားသော Video မြားကို ပွနျလညျကွညျ့ရှုလိုပါက မိုဘိုငျးဖုနျးတှငျဖွဈစေ Computer တှငျဖွဈစေ SD ကဒျထုတျ၍ အလှယျတကူ ပွနျလညျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
? ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ ► မနကျ 9:00 မှ ည 5:00 ထိ။
? အျောဒါမှာယူလိုပါက ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျအတှငျး ဖုနျးဆကျမှာယူပေးပါ။
⏰Open Time-9am To 5pm(ဆိုငျပိတိခြိနျတှငျ ဖုနျးမြားလဲပိတျထားပါသညျ။)
Be the first to review “Spy Video Recorder – Gf08” Cancel reply
Solar power bank wifi hidden spy camera
Camera, Men, Spy, Technology
SQ13 Waterproof Wifi Camera
SQ17 Spy Camera
Camera, Security, Spy
IP Robot Camera - Motion Baby Camera Ks50,000.00 Ks34,000.00
Car air purifier with water Ks17,000.00 Ks13,500.00
Pet Feeder - water and food for dog Ks15,000.00 Ks12,000.00
Car Pillow Support Ks30,000.00 Ks23,500.00